Saịtị Casino Online - Online Casino Bonus Codes
(234 votes, nkezi: 4.00 si 5)
Loading ... Kemgbe ọtụtụ afọ, ịgba chaa chaa n'Ịntanet na South Korea bụ nanị ịkụ nzọ n'egwuregwu ịnyịnya, ịgba ígwè na ọsọ ụgbọ mmiri, yana egwuregwu na lotiri. Egwuregwu SportsToto (SportsToto) tọrọ ntọala na 1997. Na 2000, ọ bụ ịgba chaa chaa kwadoro, ma ọtụtụ n'ime ha na-eje ozi na ndị bịara abịa mba ọzọ. naanị otu ụlọ ịgba chaa chaa na-emeghe ndị obodo. Ebe ọ bụ na a na-ekwe ka ígwè oghere dị na mba naanị na casinos, ha na-ejikwa nanị ndị South Korea.
A machibidoro ụmụ amaala nke South Korea iwu igwu egwu na chaa chaa, ọ bụghị naanị n'ụlọ, kamakwa ná mba ọzọ. Lelee, n'ezie, siri ike ime ka mmachibido iwu a, mana ọ na-agabiga ahụhụ dịka iwu si dị "onye ọhụụ onye ọhụụ mara mma" nke kachasị mkpọrọgwụ nke afọ 3 na ihe dị mma maka dollar 25 000 US.
E kwere ka ụmụ amaala South Korea na-egwu n'etiti ndị enyi na ndị òtù ezinụlọ na obere ego (ihe na-erughị 10 cents). Anyị na-ahụ na ịgba chaa chaa na ịgba chaa chaa na mba anyị, e nwere lotteries abụọ: Lotto na Toto. Nke abụọ bụ ụdị ịkụ nzọ egwuregwu.
Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na South Korea
Na South Korea, enweghị iwu ịgba chaa chaa n'ịntanetị. N'otu oge ahụ, e nweela ọtụtụ iwu ndị a na-eji egbochi egwuregwu na egwuregwu vidio. N'oge ahụ, mmadụ agaghị enwe ike ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ na-achịkwa online na casinos. Otú ọ dị, e nwere oghere ndị na-akwadoghị iwu nke ndị omempụ a haziri ahazi na-agba ọsọ. Mgbe ndị ọrụ mmanye na-ahụ maka ha, ndị saịtị a na-emechi ozugbo, mgbe ahụ dịka ngwa ngwa meghere ndị ọhụrụ.
Ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ndị bi na South Korea na-eleta saịtị ndị ịgba chaa chaa na mpaghara ndị ọzọ na nke ọzọ. Ka gọọmentị na-elekọta ego ya, ọ mara ọkwa na atụmatụ ga-ebute nnukwu ọgụ na ndị ọrụ ala ọzọ. Ịbawanyewanye na-elekwasị anya na saịtị ịkụ nzọ n'ịntanetị na egwuregwu.
Ndepụta nke Top 10 Korea Online Casino saịtị
Egwuregwu saịtị na saịtị na-anabata ndị si South Korea
Hụ ndepụta nke saịtị ntanetị n'ịntanetị na-anabata ndị si na South Korea, na-enyekwa nnukwu egwuregwu na nchekwa. N'ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ntụrụndụ dị iche iche site na ntinye oghere na egwuregwu ndị na-ere chaa chaa na-ere site na ndị na-ere ihe dị otú a dị egwu NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Egwuregwu Egwuregwu, na ọtụtụ ndị ọzọ. I nwekwara ike gụọ nyocha anyị banyere saịtị ntanetị n'ịntanetị, iji mara ọkwá kacha mma n'ịntanetị, ụgwọ ego na nhọrọ nkwụnye ego ndị dị na ndị South Korea.
Korea kasịnụ kasịnụ
Ezigbo Lena, taa ka m ga-agwa gị banyere njem ya na South Korea, karịa na isi obodo nke obodo a dị na Seoul. E nwere mara mma, dị ọcha ma na-atọ ụtọ. Otú ọ dị, o yiri ka m na Pyongyang dị na North Korean, okporo ámá dị ọcha, kwa, ma n'ihi ihe dị iche iche.
Otú ọ dị, Lena, ị maara nke ọma na ndọrọ ndọrọ ọchịchị adịghị amasị m, a pụghị ikwu banyere ịgba chaa chaa. Ọ dị na Seoul, Korea kasị ukwuu casino - Paradise Casino Walkerhill.Ono ị ga-ahụ ya n'anya n'ihi na ọ na - akwalite ịgba chaa chaa otu n'ime ndị na - eme egwuregwu kachasị amasị gị - Robert De Niro. Ka ị na-amasị Al Pacino? Ihe ọ bụla ọ dị, dị ka De Niro nke e gosipụtara na ọtụtụ akwụkwọ iwu. Enwere oge mgbe m malitere iche na ọ bụ ya nwe Paradise Casino Walkerhill. N'ozuzu, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, m gaghị atụ anya.
The Paradise Casino Walkerhill na-egwu nanị ndị ala ọzọ, ọtụtụ n'ime ụmụ amaala Japan. Ndị Korea n'onwe ha nọ n'ebe ahụ dịka ndị ọrụ: ndị na-ere ahịa na-ere ahịa, ndị na-echere, ndị na-ese akwụkwọ, ndị na-ese ihe na ndị ọzọ. Site n'ụzọ, ndị ọrụ na cha cha chaa mma. Ndị niile na-asọpụrụ, ndị ọkachamara ma na-asụ asụsụ Bekee, Japanese na asụsụ mba ọzọ, naanị na Russian dịka ihe na-adịghị ukwuu. Ma ọ bụghị ma ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù, iwe na-adịghị mma na àgwà ọjọọ. Ihe niile ị hụrụ n'anya, Lena.
Ugbu a ugbu a bụ oge ị ga-abanye n'ozuzu ya, n'ihi na, dịka ị maara, n'ime ha ka ọ bụ onye a na-ekwukarị na ịgba chaa chaa mepụtara. Casino dị na Seoul na district Kavanchzhin-gu Street Uokerhil-177 ma na Sheraton Hotel. Ajụdịla m otú m si echeta adreesị ahụ. N'ezie, achọtara m na Ịntanetị, na ụlọ ụgbọala ahụ nke taxi na-enweta, na-agwa onye ọkwọ ụgbọala aha ahụ.
Walkerhill na-ele anya ma ma n'èzí ma n'ime. Naanị eserese nke cha cha na-amachibidoro iwu, ma ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ndị nwe cha cha achọghị ka ha kwụsị ndị ahịa ụda. Tụkwasị na nke a, ụfọdụ ndị na-eme ihere banyere egwuregwu ịgba chaa chaa ha. N'ozuzu, maka ihe ndị a na-akpata foto ezigbo nsogbu. Ma echegbula, Lena, ihe m ka jisiri ike gbaa.
Paradise Casino Walkerhill na-arụ ọrụ na elekere na-enweghị nkwụsị. N'ihe banyere ọdịdị ihu na ihu ụfọdụ na-achọsi ike n'ebe ahụ. Ọ gwụla ma ị gaghị anabata Lena, ma ọ bụrụ na ị na-eyi otu n'ime uwe ha na-adịghị mma, na nna gị na-agbaghara ezinụlọ ahụ na ụcha akpụkpọ ụkwụ na nkedo, na-eyi akwa mkpuchi. Ọ bụ ezie na eziokwu ahụ bụ na agbata obi Japan, a na-ele anya na a na-anakwere.
N'ikwu okwu banyere ndị Japan, n'ụlọ, ụmụ okorobịa a nọ n'ọnọdụ dị jụụ, dị jụụ ma debekwa ya, mana na mba ọzọ dị ka a ga-asị na ha gbanwere. The Paradise Casino Walkerhill Enwere m ọganihu izute onye nwoke site na aha Tanaka Esutigatsu. Mgbe ọ gwara onwe ya, m gwara ya ma ọ bụ onye so na ya na ninja ezinụlọ. Ọ malitere ịchị ọchị, na-egosi ezé ya gbagọrọ agbagọ ma kwuo na akụkụ nke Honda ezinụlọ. Mgbe ahụ, m gwara ya ka ọ bụrụ onye maara ya. mmanya na-egbu mmanya na Japanese - otú ahụ ka m na-ekwukarị, ma ekweghị m. Ma mgbe ọkara ọkara iji iji cocktails dị iche iche Tanaka echefuru echefughị ​​English ma enwere m agụụ ịgba egwú na tebụl maka blackjack. Nrọ ndị ahụ bụ eziokwu. Ọ amaliteworị ileghara ọrụ nche anya anya. Ma, m na-eme ka nwa okorobịa dị jụụ wee mee ka ọ nọdụ ala na tebụl.
Ya mere, ị maara Lena, na-egwuri egwu blackjack zuru oke. N'ihi ya, ekpebiri m inyere ndị ogbenye Japanese aka ma zụtara ya ụfọdụ ibe. Egwuregwu ahụ malitere, Enweghị m ihe ọghọm, $ 3,000 gara Fundino enyemaka. N'otu oge ahụ, Tanaka ji aka ya merie. Ọ na-ele anya ugbu a ugbu a, obi nwatakịrị ji obi ụtọ ṅụrịrị ọṅụ ọ bụla. M kpebiri na ya na ihe niile dị n'usoro wee gaa kpọọ. Mkparịta ụka kwụsịrị m maka ezigbo oge 40. Mgbe Tanaka laghachiri, ọ ghacharịrị ịhapụ otu 15,000. Ọ malitere ịkwa ákwá ma nye ya akwa uwe ya, uwe elu ya, akpụkpọ ụkwụ, na nchedo Casio. N'ihi ya, ndị nche na-eduga ndị Japan, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na m gbalịrị igbochi ha. Enweghị ike. Ma echere m na ị ghọtara ihe kachasị mkpa nke Lena - na ndị dị otú a bụ ndị Japanese n'oge awa ụra.
Echegbula, Lena. Na Tanaka dị mma. O bi na Sheraton. Ihe m na-amaghị. Ajọ m mere ka m kpọbata n'ụlọ Tanaka, ebe anyị nọdụ na tagzi m wee malite ịjụ ebe o bi. N'ebe a, ndị Japanese malitere iji biliberdu. Na nke m nwere ike ịzaghachi: "Ebee ka ị na-egbu ọkụ na-adị ndụ!" N'ihi ya, ekwentị ya dara ụda na mberede. Akpọrọ m ndị Japanese gaa n'ọnụ ụzọ ụlọ nkwari akụ, mgbe nke ahụ gasịrị, ndị ọrụ ahụ nyere ya aka ịbata n'ime ụlọ gị. Mgbe e mesịrị, achọpụtara m na Tanaka - onye nkịtị. Ee, nke a bụ ihe nkịtị, nke ahụ nwere ike ịhapụ ụlọ ahịa ahụ $ 15,000. Ọ bụ ezie na, ọ nwere ike ịbụ mpako na-emekarị na Japan.
Ọ ka mma ịlaghachi na Paradise Casino Walkerhill. Blackjack bụ ihe na-echebara echiche, ma na nnukwu ụlọ egwuregwu Korea, e nwere egwuregwu ndị ọzọ ebe 7 dị iche ruleti, 15 tables for blackjack, banyere 150 oghere ígwè, tebụl iri na abụọ maka poker na craps, yana kakoe - ọnụ ọgụgụ a na-enweghị atụ maka tebụl maka baccarat. Amaghị m ihe mere ndị mmadụ ji eche na South Korea, egwuregwu a na-ewu ewu.
Ọ bụ ezie na baccarat ka na-achọ na ụfọdụ okirikiri, ma o yikarịghị ka ọ ga-enwe ike mpi na Texas Hold'em ma ọ bụ teepu. Site na Walkerhill ọ mara mma:
Lena, ekwenyela na mberede ihe mberede efu, na-ekwu otu ihe ahụ dị ka iji eserese n'ebe ahụ siri ike. Ma ọ bụghị ruo mgbe ọ nwere. Walkerhill n'ozuzu ikuku ebe kachasị mma na-enye foto a:
Ọfọn, ọ bụ oge iji nweta ngwaahịa nke Paradise Casino Walkerhill. Ya mere, ọ dị mbara, ezigbo ndị ọrụ, ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, nnukwu nhọrọ nke egwuregwu. Kedu ihe nwere ike ịbụ adịghị mma? Mmetụta nke nlele anya mgbe nile, ya mere e nwere ụfọdụ casinos ma adighi adọrọ ya mma nke ọma. Back in Paradise Casino Walkerhill ọtụtụ tables for baccarat, ma nke a bụ ihe m na-ekwu. Dị ka okwu ahụ na-ekwu: Enweghị mmasị na kaadị - ntụgharị ụkwụ nke uba.
N'agbanyeghị na Paradise Casino Walkerhill bụ ebe dị mma. Robert De Niro abụghị ndụmọdụ ọjọọ. Mana ọ bụrụ na ị kwenyere na Lena Robert, ị gaghị achụpụ, ma ọ dị mma iji gaa ma lelee ya na ahụmahụ onwe onye. Ọbụna m nwere ike inye ego. Emela ebere, dị ka Paradaịs Casino Walkerhill m masịrị m.
0.1 Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na South Korea
0.2 Ndepụta nke Top 10 Korea Online Casino saịtị
2.1 Egwuregwu saịtị na saịtị na-anabata ndị si South Korea
2.2 Korea kasịnụ kasịnụ